Iyo software yekungoerekana yaendesa online roulette manhamba kune iyo Excel spreadsheet
Kana iwe ukashandisa Excel kugadzira ako roulette masisitimu, Roulette 2 Xls inofanirwa kunge iri chikamu chesoftware yako arsenal.
Kutenda kune nyowani software yekubata injini Screen Capture Engine maowoni matsva ari kuvhurira ramangwana chirongwa che ThatsLuck.
Kugovera chikamu chekucherechedzwa kwepamhepo roulette manhamba kune inozvimiririra software, muchokwadi, inondibvumidza kuti ndigadzire chikamu chekuvandudza chemashandisirwo matsva chisendeke uye nekukurumidza zvakanyanya, kusanganisira iyi nyowani software ne ThatsLuck, iyo yandakatumidza Roulette 2 Xls.
Shandisa maXls machira kuti utambe roulette
Ini ndinotenda kuti pakarepo mushure mekuronga nemumwe mutauro, Excel ndiyo yakanakisa software yekuvandudza uye kuyedza masisitimu e kuhwina online roulette.
Muchokwadi, kune akati wandei mawebhusaiti anopa maspredishiti akagadzirirwa roulette, pamwe nezviuru zvevashandisi avo, nekuda kwekugona kukuru kweExcel, vanokwanisa kugadzira akagadzirwa maXls machira.
Dambudziko chete nderekuti kana tangogadzira pepa redu, iyo manhamba eroulette inofanirwa kuiswa manyore imwe panguva.
Kutenda kune iyo nyowani software Roulette 2 Xls kunyangwe iyi nzira inonetesa inogona kugadziriswa zvizere, nezvose zvakanakira mabhenefiti.
Roulette 2 Xls: unoshandisa sei software?
Roulette 2 Xls iri nyore kwazvo kushandisa, muchokwadi ingori nyaya yekuvhura tafura yekasino, yedu Excel spreadsheet uye software yekutora otomatiki manhamba akasarudzwa Screen Capture Engine.
Iyo purogiramu ine mashoma mashoma sarudzo: kurudyi, semuenzaniso, kune ese marongero e Anti Disconnection Bet; kana zvirokwazvo tichida kuenda kwemaawa kana mazuva Roulette 2 Xls kuunganidza dhata, ingo shandisa iyi sarudzo uye yega yega roulette inosvetuka iyo bot ichatamba pane tsvuku uye nhema neiyuniti imwe, zvakaringana kuti isabatanidzwe kubva kukasino.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuve nechokwadi chekuti edu maXls sheet anogara aripo kumberi kumberi pane desktop, kunyangwe patinodzvanya kubheja patafura yeiyo roulette, kuti uwane izvi ingosarudza sarudzo Excel Pamusoro Yakatarwa, asi izvi chete mushure mekusarudza iyo Excel hwindo kubva kune yekudonha-pasi menyu.
Dzimwe sarudzo pane kurudyi kunetsekana marongedzo anofanirwa kuiswa kuti awane iwo akasiyana mapoinzi pachiratidziro chinoenderana nered / dema uye chikamu chidiki chinosarudzirwa kubheja.
Zviripachena, kana pachinzvimbo chekunyora manhamba isu tinofanirwa kushandisa yedu Excel sheet kuti titambe, hazvizove zvakakosha kuita sarudzo iyi.
Kubva kuRoulette kune yako Excel spreadsheet: maitiro ekufambisa data
Kuruboshwe kwechirongwa iwe unogona kusarudza kana kuendesa iyo data kune Xls pepa, muchokwadi iwe unogona zvakare kungorekodha manhamba uye kuachengeta mune zvinyorwa faira kune zvimwe zvinangwa.
Kana iwe uchida kutora mukana weese maExcel mapepa awakagadzirira roulette, ingo tora sarudzo KuXls Cell uye sarudza kana iwe uchida kugara uchiendesa manhamba pane imwechete sero reXls yako sheet (sarudzo Sero Rimwe Chete), kana kuwedzera ivo imwe panguva mukoramu, kutanga kubva kune yakatarwa sero (sarudzo Muchikamu).
Muminda miviri Isai ipapo pazasi iwe unozonyora tsamba yekutanga yesero rakasarudzwa uye nhamba yenhare.
Semuenzaniso, kana iwe uchida kugashira iyo data mukoramu kutanga kubva pasero D14 yetsamba yako, iwe unopinda 'D' mundima yekuruboshwe uye '14' kurudyi.
Panguva ino iwe unofanirwa kungodzvanya bhatani kutanga pane inotora software Screen Capture Engine (izvo zviri pachena kuti zvinofanirwa kumisikidzwa sezvawatoona mune akasiyana matrairi pa ► YouTube) uye kana zvese zvave kumiswa nenzira kwayo, yega yega roulette nhamba inoendeswa kune yako Xls sheet, chaipo paunoda!
Bhonasi: iyo Xls pepa reRoulette Statistics!
Con Roulette 2 Xls Zvakare inosanganisirwa iXls sheet rakagadzirirwa otomatiki kugadzirisa kwe Roulette nhamba, iyo yaunogona kuita bvunzo dzese kuti udzidze kushandisa zvisizvo kugona kweiyo nyowani roulette software.
Iyo Xls jira inodzivirirwa ne password pakuvhura (pasiwedhi yakafanana neiyo software yekushandisa kodhi), iyo iwe yaunogona pachena kudzima.